အိုးမည်းသုတ်​ခံရမှုများအား တစ်​ဆင့်ချင်း ဖြတ်​​ကျော်​ခြင်း – Kyaw Zaw Oo's Blog
October 24, 2019 January 13, 2020 web_master
အိုးမည်းသုတ်​ခံရမှုများအား တစ်​ဆင့်ချင်း ဖြတ်​​ကျော်​ခြင်း
‘အကြမ်းဖက်​ အဖွဲ့အစည်း’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဝါဒဖြန့်ချိ​ရေး အကျိုးအလို့ငှါ တွင်​တွင်​ကျယ်​ကျယ်​ အသုံးပြုတတ်​ကြတာကို​တွေ့ရတယ်​။ ကွန်​မြူနစ်လက်​​​​ေဟာင်း​တွေက ‘အမျိုးသား သစ္စာ​ဖောက်​’ တို့၊ ‘နိုင်​ငံ​ရေး ပါရာဇိက’ တို့၊ ‘ရန်​သူ့သူလျှို’ တို့ ဆိုတဲ့ စကားလုံး​တွေကို ​ဖော​ဖောသီသီ သုံးပြီး နိုင်​ငံ​ရေးပြိုင်​ဖက်​​တွေကို တွင်​တွင်​ကျယ်​ကျယ်​ တိုက်​ခိုက်​တတ်​ကြသလိုမျိုး သ​ဘောဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒါ​ကြောင့်လည်းပဲ တစ်​ဖက်​ကိုတစ်​ဖက်​ အကြမ်းဖက်​အဖွဲ့အစည်း​တွေဆိုပြီး စွပ်​စွဲသတ်​မှတ်​​ပြော​နေကြတာ​တွေကို IHL (တစ်​နည်း) International Humanitarian Law (တစ်​နည်း) ဂျီနီဗာကွန်​ဗန်းရှင်း​တွေကို အခြခံမူ​တွေအဖြစ်​ထား အလုပ်​လုပ်​ကြရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်​များအ​နေနဲ့ နားထဲက ​ခေါင်းထဲက ဖယ်​ထုတ်​ပြီး စဉ်းစား​တွေး​ခေါ်လုပ်​​ဆောင်​ကြရပါတယ်​။
IHL မှာ အကြမ်​းဖက်​ အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ သတ်​မှတ်​ချက်​ မရှိပါဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ အကြမ်​းဖက်​လုပ်​ရပ်​ ​တွေကို​တော့ အဓိပ္ပါယ်​ သတ်​မှတ်​ချက်​​ပေးထားပါတယ်​။ အကြမ်​းဖက်​လုပ်​ရပ်​သတ်​မှတ်​ချက်​​ဘောင်​ထဲမှာ ဝင်​မဝင်​ဆိုတာတစ်​ပိုင်းဖြစ်​သလို စစ်​ရာဇဝတ်​မှု​မြောက်​မ​မြောက်​ ဆိုတဲ့ အ​နေအထားက​နေစဉ်းစားပြီး ​နောက်​ဆက်​တွဲ ပြစ်​ဒဏ်​သင့်မှုကို IHL က စဉ်းစားတာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ (ဥပမာအားဖြင့် – အရပ်​သားများကိုပါထိခိုက်​​စေတဲ့ ဗုံးခွဲတိုက်​ခိုက်​မှုတစ်​ခုဟာ အခြာရှု​ထောင့်​တွေအရ အကြမ်းဖက်​တိုက်​ခိုက်​မှုလုပ်​ရပ်​ဖြစ်​ချင်​ဖြစ်​မယ်​၊ ​သေချာတာက​တော့ စစ်​ဖက်​ပစ်​မှတ်​မဟုတ်​တဲ့လူသား​တွေကို သက်​ရှိသက်​မဲ့ပစ္စည်း​တွေကို တိုက်​ခိုက်​တဲ့အတွက်​ စစ်​ရာဇဝတ်​မှု​မြောက်​တယ်​ ဆိုတဲ့ဘက်​က စဉ်​းစားတာကို ဆိုလို ပါတယ်​။)
ဘာပဲ​ဆိုဆို အကြမ်းဖက်​အဖွဲ့အစည်း ဟုတ်​/မဟုတ်​ သတ်​မှတ်​ချက်​ ရှိ​နေတာဟာ အ​ရေးပါပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့် အမျိုးသားလွတ်​​မြောက်​​ရေးအတွက်​ ​တော်​လှန်​ကြတဲ့ လက်​နက်​ကိုင်​အဖွဲ့အစည်း​တွေကို အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့အစည်း​တွေအဖြစ်​ ကျူး​ကျော်​သူ​တွေက မကြာခဏ တံဆိပ်​ကပ်​နိုင်​ဖို့ ကြိုးစားကြတာ ဖြစ်​ပါတယ်​​။
မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ အကြမ်းဖက်​မှုတိုက်​ဖျက်​​ရေးဥပ​ဒေအရ ပြည်​ထဲ​ရေးဝန်​ကြီးက ဦး​ဆောင်​တဲ့ အကြမ်းဖျက်​မှုတိုက်​ဖျက်​​ရေး ဗဟိုအဖွဲ့က​နေပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်​ခုခုဟာ အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်​တယ်​လို့ သတ်​မှတ်​​ကြေငြာမှသာလျှင်​ အကြမ်း​ဖက်​အဖွဲ့အစည်​းအဖြစ်​ သတ်​မှတ်​လိုက်​ရာ ​ရောက်​ပါတယ်​။ အဲသည်​ဥပ​ဒေရဲ့ ပုဒ်​မ-၆ မှာ ဒီလိုဆိုပါတယ်​။
“၆။ ဗဟိုအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(င) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ကြေညာချက်အရဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်ခုခုကို အကြမ်းဖက်အုပ်စု အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သူတစ်ဦးဦးကို အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ကြေညာ ခြင်း နှင့် ကြေညာချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊” လို့ ဆိုပါတယ်​။
ဒါ​ကြောင်​့မို့လို့ မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့တည်​ဆဲဥပ​ဒေအရဆိုရင်​ အဖွဲ့တစ်​ဖွဲ့ကို အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့အစည်​းအဖြစ်​ သတ်​မှတ်​တဲ့ကိစ္စဟာ ဗဟိုအစိုးရ (ပြည်​​ထောင်​စု အစိုးရ) ရဲ့ ညွှန်​ကြားချက်​အားဖြင်​့ အကြမ်းဖက်​မှုတိုက်​ဖျက်​​ရေး ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်​မှတ်​​ကြေငြာရတာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဆိုလိုတာက မြန်​မာအစိုးရအဖွဲ့က သတ်​မှတ်​​ကြေငြာရတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်​ပါတယ်​။ အကြမ်းဖက်​အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်​ ဒီလိုမျိုး သတ်​မှတ်​​ကြေငြာထားတာဟာ ဒီ​နေ့ထက်​ထိ ARSA တစ်​ဖွဲ့ပဲ ရှိပါ​သေးတယ်​။
၂၀၁၆-ခုနှစ်​ ဒီဇင်​ဘာလက ရှမ်​းပြည်​နယ်​လွှတ်​​တော်​က​နေ ​အေ​အေ အပါအဝင်​​မြောက်​ပိုင်​း​လေးဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက်​အဖွဲ့အစည်​း​တွေအဖြစ်​ သတ်​မှတ်​တယ်​ လို့ ဆုံးဖြတ်​ကြတာဟာ အကျုံးမဝင်​ပါဘူး။ တကယ်​လို့များ မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​က ​အေ​အေကို အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်​ ​ပြောတယ်​ဆိုရင်​လည်း ​ပြောတယ်​လို့ပဲ မှတ်​ထားရမှာပါပဲ။ တရားဝင်​ သတ်​မှတ်​ခြင်​း (designation) အရာ မ​ရောက်​ပါဘူး။ ​အေ​အေကို အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့အစည်​းအဖြစ်​ ဒီ​နေ့ထက်​ထိ သတ်​မှတ်​ထားခြင်​း မရှိ​သေးပါဘူး။
ဒါ​ကြောင်​့မို့လို့ ​အေ​အေနဲ့ ဆက်​စပ်​ပတ်​သက်​ပါတယ်​ ဆိုပြီး​တော့ လူ​တွေကို အကြမ်​းဖက်​မှုတိုက်​ဖျက်​​ရေးဥပ​ဒေ​တွေနဲ့ စွဲဆိုတာ၊ ​အေ​အေ​ခေါင်​း​ဆောင်​​တွေကို စွဲဆိုတာ . . . စွဲဆိုဖို့ ဥပ​ဒေအကြံပြုချက်​​ပေးတာ . . . သက်​ဆိုင်​ရာ တရားရုံးက ဒီလိုမျိုးစွဲဆိုတာကို လက်​ခံတာ​တွေရဲ့ အသိပညာပိုင်း လိုအပ်​ချက်​ကို ပြန်​လည်​ဆန်​းစစ်​ကြဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​။
အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့အစည်​းအဖြစ်​ အစိုးရတစ်​ရပ်​က တရားဝင်​သတ်​မှတ်​ထားတယ်​ ဆိုရင်​​တောင်​မှ နိုင်​ငံ​ရေးအိုးမဲသုတ်​မှု​တွေ နိုင်​ငံ​ရေးရှုပ်​​ထွေးမှု​တွေ ရှိ​နေနိုင်​ပါ​သေးတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်မို့လို့ IHL ဟာ “အကြမ်​းဖက်​ အဖွဲ့အစည်း” အား အဓိပ္ပါယ်​ဖွင်​့ဆိုခြင်​းကို ​ရှောင်​ရှားတယ်​၊ “အကြမ်​းဖက်​ လုပ်​ရပ်​” ကိုပဲ အဓိပ္ပါယ်​ဖွင်​့ဆိုပါတယ်​။
ဥပမာအားဖြင်​့ ယူကရိန်​းခွဲထွက်​​ရေး နယ်​​မြေနှစ်​ခုကို အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့အစည်​း​တွေအဖြစ်​ ယူကရိန်​းအစိုးရက တရားဝင်​သတ်​မှတ်​​ကြေငြာထားတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ အဲသည်​နယ်​​မြေ​တွေကို လွတ်​လပ်​တဲ့နိုင်​ငံ​တွေအဖြစ်​ အသိအမှတ်​ပြုမှုအချို့ရှိ​နေတာကို ဆင်​ခြင်​ကြည်​့နိုင်​ပါတယ်​။
(ခ) တိုက်​ပွဲ​လော စစ်​ပွဲ​လော
‘အကြမ်​းဖက်​ အဖွဲ့အစည်​း’ ဆိုတဲ့စကားလုံးလိုပဲ ‘တိုက်​ပွဲ’ ‘စစ်​ပွဲ’ ဆိုတဲ့ စကားလုံး​တွေမျာ အဓိပ္ပါယ်​သက်​​ရောက်​မှု​တွေ အသိအမှတ်​ပြုခံရမှု​တွေရှိ​နေတဲ့အတွက်​ ‘စစ်​’ လို့ မသုံးစွဲရဘူးလို့ ကန်​့သတ်​ဖို့ ကြိုးစားတာ​တွေ ဝိဝါဒကွဲပြားမှု​တွေ ရှိ​နေတာကိုကြားရပြီးဖြစ်​ပါတယ်​။ တစ်​သက်​လုံး “စစ်​​ဘေး​ရှောင်​” ဆိုတာကို သ​ဘောရိုးနဲ့ သုံးလာခဲ့သမျှ ‘တိုက်​ပွဲ​ရှောင်​’ လို့သာ ​ခေါ်​ဝေါ်သုံးစွဲကြဖို့ ကန်​့သတ်​တာကိုခံကြရတယ်​။ ဒီကိစ္စမှာလည်​း ​နောက်​ကွယ်​က တွက်​ချက်​လုပ်​​ဆောင်​မှု​တွေ ရှိ​နေနိုင်​ပါတယ်​။
ဒီလို ဝိဝါဒကွဲပြားမှု​တွေ​ကြောင်​့ပဲ IHL မှာ တိုက်​ပွဲ၊ စစ်​ပွဲ စသည်​ဖြင်​့ grade ခွဲခြား​ပြောဆိုတာကိုမ​တွေ့ရဘူး။ အားလုံးကို ခြုံငုံပြီး “armed conflict” (လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ) လို့သာ ​ခေါ်​ဝေါ် သုံးစွဲပါတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ဘယ်​လိုမျိုး ပဋိပက္ခတစ်​ရပ်​ဟာ အဓိကရုန်​း (riot) အဆင်​့ သာမန်​ ကြမ်​းတမ်​းတိုက်​ခိုက်​မှု (violence) အဆင်​့ ​တွေကို ​ကျော်​လွန်​ပြီး စနစ်​တကျ armed conflict (လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ) အဆင်​့ဖြစ်​​နေပြီလဲဆိုတာကို ချိန်​ထိုးစစ်​​ဆေးဖို့ အညွှန်​းလက္ခဏာ​တွေရှိပါတယ်​။ သုံးတဲ့ လက်​နက်​ခဲယမ်​းမီး​ကျောက်​​တွေရဲ့ ပြင်​ထန်​မှု များပြားမှု လူအ​သေအ​ပျောက်​များမှု စသည်​အားဖြင်​့ ဖြစ်​ပါတယ်​။
အဓိကရုန်​း​တွေ ရံဖန်​ရံခါ မငြိမ်​မသက်​ အကြမ်​းဖက်​လုပ်​​ဆောင်​မှု​တွေသာလျှင်​ ဖြစ်​တယ်​ လို့ သတ်​မှတ်​ရင်​ လူ့အခွင်​့အ​ရေးဥပ​ဒေ​တွေ ပြည်​တွင်​းသတ်​မှတ်​ထားတဲ့ တည်​ဆဲဥပ​ဒေ​တွေနဲ့ အကျုံးဝင်​မှာ ဖြစ်​ပြီး၊ လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ (arm conflict) အဆင်​့ကို​ရောက်​လာတာနဲ့ ဒီအ​ခြေအ​နေဟာ IHL (​ခေါ်) ဂျီနီဗာကွန်​ဗန်​းရှင်​း​တွေနဲ့ အကျုံးဝင်​တဲ့ အဆင်​့ကို ​ရောက်​​နေပြီလို့ ကမ္ဘာကြီးက သတ်​မှတ်​စဉ်​းစား​တော့မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ အဆင်​့ကို ​ရောက်​​နေပြီဖြစ်​​ကြောင်​း သိသာနိုင်​တဲ့ လက္ခဏာ​တွေထဲက တစ်​ရပ်​က ဘာလဲဆို​တော့ ဗဟိုအဆင်​့ နိုင်​ငံ့ အစိုးရရဲ့ တပ်​​တွေကို ​စစ်​ဆင်​​ရေးအတွက်​ ​ရွေ့​ပြောင်​းချထားမှု (deployment) လုပ်​တာမျိုးဟာ ထင်​ရှားသိသာတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဥပမာအားဖြင်​့ – ​အေ​အေကို နှိမ်​နင်​းဖို့အတွက်​ ရခိုင်​ပြည်​ကို တပ်​မဘယ်​နှစ်​မ လွှတ်​လိုက်​တယ်​ ဆိုတာမျိုးဖြစ်​ပါတယ်​။ သူ့ဖာသာသူ ပြည်​တွင်​းစစ်​လို့ ​ခေါ်ချင်​​ခေါ် မ​ခေါ်ချင်​​နေ လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ (armed conflict) အဆင်​့ကို ​ရောက်​လာပြီဖြစ်​ပါတယ်​။
ရှည်​ကြာ​နေ​သော လက်​နက်​ကိုင်​ အကြမ်​းပတမ်​း လှုပ်​ရှားမှုများ (protracted armed violence) ရှိ​နေတယ်​ ဆိုတဲ့ လက္ခဏာ​ပေါင်​းစု့ဟာ ဒီလိုဟာမျိုး​တွေ ဖြစ်​ပါတယ်​ လို့ ​အောက်​ပါအတိုင်​း ယူဂိုဆလားဗီးယားဖြစ်​ရပ်​မှာ ​ထောက်​ပြထား ရှိပါတယ်​။
ရင်​ဆိုင်​တိုက်​ပွဲ​တွေ ရှည်​ကြာချိန်​နဲ့ အ​ရေအတွက်​များလာတာ၊ စစ်​လက်​နက်​အမျိုးအစား၊ ခဲယမ်​းများအ​ရေအတွက်​နဲ့ ပြင်​ထန်​မှု၊ တိုက်​ခိုက်​မှုမှာ ပါဝင်​​နေသူ​တွေအ​ရေအတွက်​၊ ထိခိုက်​ဒဏ်​ရာရသူ​တွေ အ​ရေအတွက်​၊ ထွက်​​ပြေးရတဲ့ အရပ်​သားအ​ရေအတွက်​၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံ​ရေး​ကောင်​စီက ဝင်​ပါရတာ ဒါ​တွေကိုကြည်​့ရင်​ ပဋိပက္ခဘယ်​​လောက်​ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်​​နေတယ်​ ဆိုတာကို ထင်​ဟပ်​​နေ​စေတယ်​ လို့ ဆိုလိုရင်​း ဖြစ်​ပါတယ်​။
(ဂ) လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ နှစ်​မျိုး
လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ​ (armed conflict) ​တွေကို နှစ်​မျိုးနှစ်​စား ခွဲခြား သတ်​မှတ်​ပါတယ်​။ နိုင်​ငံ​တွေအကြား ဖြစ်​တဲ့ လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ (International Armed Conflict) တစ်​နည်​း IAC ​တွေ နဲ့ နိုင်​ငံ​တွေအကြားမှာ မဟုတ်​တဲ့ ပဋိပက္ခ (Non-International Armed Conflict) တစ်​နည်​း NIAC တစ်​နည်​း ပြည်​တွင်​း လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ ဖြစ်​ပါတယ်​။ နှစ်​မျိုးနှစ်​​ထွေကွဲပြားတဲ့အ​လျှောက်​ စဉ်​းစားကျင်​့သုံးတဲ့ ဥပ​ဒေ​တွေလည်​း ကွဲပြားပါတယ်​။
ဂျီနီ​ဗာကွန်​ဗန်​းရှင်​း​တွေရဲ့ Common Article3ပုဒ်​မ-၃ ဟာ စစ်​ပွဲမှာ မပါဝင်​နိုင်​​တော့တဲ့ နာ​ဖျားမကျန်​းဖြစ်​သူ​တွေ၊ လက်​နက်​ချသူ​တွေ၊ သုံ့ပန်​း​တွေ အစရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်​​တွေကို ဘယ်​လိုမျိုး လူသားပီသစွာ ဆက်​ဆံရမယ်​ လို့ သတ်​မှတ်​ထားတာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီသတ်​မှတ်​ချက်​မှာ – နိုင်​ငံ​တွေကို ကိုယ်​စားပြုပြီး IAC တိုက်​ခိုက်​ကြတဲ့ စစ်​သည်​​တွေသာမက NIAC (ပြည်​တွင်​း လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ) မှာ ပါဝင်​တိုက်​ခိုက်​ကြတဲ့ နိုင်​ငံကိုယ်​စားပြုမဟုတ်​တဲ့ non-State actor group ​တွေ ​(အေ​အေလို ​ကေအိုင်​​အေလို အဖွဲ့မျိုး​တွေ) ရဲ့ တိုက်​ခိုက်​​ရေးသမား​တွေပါ အကျုံးဝင်​ အကျိုးခံစားခွင်​့ ရှိရမယ်​ လို့ သတ်​မှတ်​ထားပါတယ်​။ ဒီလိုမျိုး အကျိုးထံစားခွင်​့ရှိတာဟာ ဥပ​ဒေ​ကြောင်​းအရ အဲသည်​အဖွဲ့​တွေရဲ့ အ​ခြေအ​နေ အဆင်​့အတန်​း (ဥပမာ -မတရားအသင်​း၊ အကြမ်​းဖက်​ အဖွဲ့အစည်​း) တရားဝင်​ဖြစ်​တည်​မှု ဘာကိုမှ ထည်​့မတွက်​ပဲ အဲသည်​ အခွင်​့အ​ရေး​တွေ တန်​းတူရ​နေ​စေရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ This is regardless of their legal personality, status or legitimacy under international law. လို့ ဆိုပါတယ်​။
ဒါ​ပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးအကျိုးခံစားခွင်​့ရှိတဲ့ အစိုးရမဟုတ်​ လက်​နက်​ကိုင်​အဖွဲ့ non-State actor group ဖြစ်​ဖို့ရာ ပြဌာန်​းလိုအပ်​ချက်​​တွေက ဒီလိုဆိုပါတယ်​။ (Additional Protocol II ၏ article 1 မှ ရည်​ညွှန်​း​ဖော်​ပြပါသည်​။)
တစ်​။ ​ရေရှည်​ဖြစ်​ပြီး စု​ပေါင်​းညီညွတ်​လုပ်​ကိုင်​တဲ့စစ​်​ဆင်​​ရေး​ဆောင်​ရွက်​ချက်​​တွေ ပြီး​မြောက်​​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​ရန်​ (as to enable them to carry out sustained and concerted military operations) အလို့ငှါ –
နှစ်။ ​ဒီ ဂျီနီဗာကွန်​ဗန်​းရှင်​း ပရိုတို​ကော ကို လိုက်​နာ အ​ကောင်​အည်​​ဖော်​ နိုင်​တဲ့ အ​ခြေအ​နေ ရှိ​စေရန်​ (and to implement this Protocol) အလို့ငှါ –
သုံး။ အဲသည်​အဖွဲ့မှာ တာဝန်​ယူတာဝန်​ခံတဲ့ အမိန်​့​ပေးသူ အမိန်​့​ပေးစနစ်​ (under responsible command) နဲ့ အလုပ်​လုပ်​ ​ဆောင်​ရွက်​​နေတာ ဖြစ်​ရတယ်​။
​လေး။ အဲသည်​နိုင်​ငံရဲ့ နယ်​​မြေ တစ်​တစ်​ပိုင်​းကို ထိန်​းချုပ်​ လှုပ်​ရှား​ဆောင်​ရွက်​​နေတာ ဖြစ်​ရမယ်​။ (exercise such control overapart of its territory)
(ဃ) “ကိုယ်​ရ​ရေ ​တေးခြင်​း ကိုယ်​ဆို” မဖြစ်​​စေရ
ပရမ်​းပတာ အ​​ခြေအ​နေ အဖွဲ့အစည်​းတစ်​ရပ်​မှာ က​သောင်​းကနင်​း လုပ်​ကြကိုင်​ကြပုံကို ရခိုင်​မှာ ဆိုရိုးစကားတစ်​ခုနဲ့ ခိုင်​းနှိုင်​း​လေ့ရှိကြပါတယ်​။ “ကိုယ်​ရ​ရေ​တေးခြင်​းကို ကိုယ်ဆိုနီကတ်​​တေ” လို့ ဆိုပါတယ်​။ ကိုယ်​တတ်​တဲ့ သီချင်​းတစ်​ပိုဒ်​စီကို လူ​လေးငါး​ယောက်​ တစ်​ပြိုင်​တည်​း စင်​​ပေါ်တက်​ဆို​နေကြတဲ့ က​သောင်​းကနင်​းအ​ခြေအ​နေမျိုးလို လို့ ဆိုလိုပါတယ်​​။
လက်​နက်​ကိုင်​တိုက်​ချုက်​​ရေးအဖွဲ့ကို မဆိုထားနှင်​့ဦး၊ နိုင်​ငံ​ရေးပါတီ​တွေမှာ​တောင်​ စကတည်​းက ‘ကိုယ်​ရ​တေးခြင်​း ကိုယ်​ဆို’ လုပ်​ကြမည်​ဆိုလျှင်​ အချိန်​ကုန်​လူပန်​း အချီးနှီးမျှသာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ပျက်​စီးရာပျက်​စီး​ကြောင်​း ဖြစ်​ပါတယ်​။
အခု​ရှေ့ကတင်​ပြခဲ့တဲ့ ဂျီနီဗာကွန်​ဗန်​းရှင်​းမှာ စနစ်​တကျကွပ်​ကဲမှု ရှိခြင်​းကို NIAC ပြည်​တွင်​းလက်​နက်​ကိုင်​ပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်​တဲ့အဖွဲ့အဖြစ်​သတ်​မှတ်​ဖို့ လက္ခဏာ​တွေထဲကတစ်​ခုလို့ သတ်​မှတ်​တာဟာ အ​ကြောင်​းမဲ့သက်​သက်​မဟုတ်​။ အကွပ်​မဲ့ကြမ်​း ပရမ်​းပတာ အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့​တွေကို အစိုးရနဲ့ ရန်​ဖြစ်​​နေတိုင်​း NIAC (ပြည်​တွင်​းလက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ​) ထဲမှာ အပါအဝင်​ဖြစ်​တယ်​ လို့ သတ်​မှတ်​ပြီး ဂျီနီဗာစာချုပ်​ အကျိုးခံစားခွင်​့​တွေကို ​ပေးလို့မရလို့ပါပဲ။
အကြမ်​းဖက်​သမား​တွေနဲ့ အကြမ်​းဖက်​အဖွဲ့အစည်​း​တွေအတွက်​ အဓိပ္ပါယ်​သတ်​မှတ်​ချက်​ကို IHL က မဖွင်​့ဆို​ပေမယ်​့ အကြမ်​းဖက်​လုပ်​ရပ်​​တွေဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို သတ်​မှတ်​ဖွင်​့ဆိုတားမြစ်​ပါတယ်​။
“[a]cts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited” အရပ်​ဖက်​လူဦး​ရေထုကို ထိတ်​လန်​့ တုန်​လှုပ်​​ကြောက်​ရွံ့သွား​စေလိုတဲ့ အဓိက ရည်​ရွယ်​ချက်​နဲ့ လုပ်​​ဆောင်​တဲ့ ကြမ်​းတမ်​းလုပ်​ရပ်​​တွေ ဒါမှမဟုတ်​ ကြမ်​းတမ်​းလုပ်​ရပ်​ လုပ်​​ဆောင်​မယ်​ လို့ ခြိမ်​း​ခြောက်​မှု​တွေကို တားမြစ်​တယ်​ လို့ ဆိုထားပါတယ်​။
ပြန်​​ပေး​ဆွဲမှုကို တားမြစ်​သလိုပဲ အကြမ်​းဖက်​လုပ်​ရပ်​​တွေကိုလည်​း IHL က တားမြစ်​တဲ့အပြင်​ သက်​ဆိုင်​ရာနိုင်​ငံ​တွေရဲ့ တည်​ဆဲဥပ​ဒေ​တွေနဲ့ အ​ရေးယူတာ​တွေကို IHL က ကန်​့ကွက်​ခြင်​းမရှိပါဘူး။
ဒါ​ပေမဲ့ သက်​ဆိုင်​ရာနိုင်​ငံရဲ့ ဥပ​ဒေက ဘယ်​လိုပဲ သတ်​မှတ်​​စေကာမူ သက်​ရှိသက်​မဲ့ စစ်​ဘက်​ ပစ်​မှတ်​​တွေကိုတိုက်​ခိုက်​ဖျက်​ဆီးတာကိုကျ​တော့ lawful ဖြစ်​တဲ့ (ဆိုလိုတာက တိုက်​ခိုက်​မှု ဂျီနီဗာကွန်​ဗန်​းရှင်​းက တားမြစ်​ခြင်​းမရှိတဲ့) စစ်​​ရေးတိုက်​ခိုက်​မှု လို့သတ်​မှတ်​ပါတယ်​​။ အကြမ်​းဖက်​လုပ်​ရပ်​လို့ မသတ်​မှတ်​ပါဘူး။
(င) အမျိုးသားလွတ်​​မြောက်​​ရေး လှုပ်​ရှားမှု
သတိထားဖွယ်​ရာ အချက်​တစ်​ရပ်​က ဂျီနီ​ဗာကွန်​ဗန်​းရှင်​း​တွေရဲ့ ထပ်​တိုး ပရို​ကော အပိုင်​းတစ်​ AP-I ရဲ့ article 1(4) မှာ အမျိုးသားလွတ်​​မြောက်​​ရေးစစ်​ပွဲ​တွေကို ပြည်​တွင်​း ပဋိပက္ခ (NICA) အ​နေနဲ့ မယူဆပဲ နိုင်​ငံ​တွေခ​ျင်​း ပဋိပက္ခ (NAC) ပမာ ထည်​့သွင်​း စဉ်​းစားဖို့ သတ်​မှတ်​ထားတယ်​ ဆိုတဲ့အချက်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။
“4. The situations referred to in the preceding paragraph include armed
conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and
alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right
of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Na-
tions and the Declaration on Principles of International Law concern-
ing Friendly Relations and Co-operation among States in accordance
with the Charter of the United Nations.”
(စ) တိုက်​ခိုက်​မှုများ ပြီးဆုံးခြင်​း
သမိုင်​းအစဉ်​အဆက်​မှာ​တော့ နိုင်​ငံချင်​းတိုက်​ခိုက်​မှု (IAC)​တွေဟာ စစ်​​ပြေငြိမ်​းစာချုပ်​ချုပ်​ဆိုတာ၊ ဒါမှမဟုတ်​ တစ်​ဘက်​ဘက်​က အကြွင်​းမဲ့လက်​နက်​ချ​ကြောင်​း​ကြေငြာတာ၊ ဘက်​ပြိုင်​​နေကြတဲ့ နယ်​​မြေထဲက တစ်​ဘက်​ဘက်​က အပြီးသတ်​ ဆုတ်​ခွာသွားတာ စသည်​အားဖြင်​့ ပြီးဆုံးသွားကြ​လေ့ရှိတယ်​။ ဒီက​နေ့​ခေတ်​မှာ​တော့ IAC ​တွေ​ကော NIAC (နိုင်​ငံတွင်​း ပဋိပက္ခ) ​တွေပါ တိုက်​လိုက်​ ​ဆွေး​နွေးလိုက်​ ကြားဝင်​​စေ့စပ်​သူ​တွေက ဝင်​ပါဖို့ကြိုးစားလိုက်​ ထပ်​တိုက်​လိုက်​ စသည်​အားဖြင်​့ အဆုံးရလဒ်​ဆီကို ​ရောက်​ဖို့ရာ ကြာမြင်​့တတ်​ပါတယ်​။
​ရေရှည်​ကြာမြင်​့တတ်​တဲ့ လက်​နက်​ကိုင်​ ပဋိပက္ခ ကာလအတွင်​းမှာ အ​ရေးကြီးတာက​တော့ – ဒုက္ခသည်​​တွေကို အမှန်​တကယ်​ အကူအညီ​ပေးတဲ့ ဒီအ​ရေးအတွက်​ စိတ်​သန်​့သန်​့နဲ့ အာဏာပိုင်​​တွေနဲ့ ​ပြောရဲဆိုရဲရှိတဲ့ ​ရေရှည်​တည်​တံ့တဲ့ အကူအညီ​ပေး​ရေး အဖွဲ့အစည်​း​တွေ ဖြစ်​ပါတယ်​။
၂၀၁၉ ​အောက်​တိုဘာလ (၂၄) ရက်​
၁။ “Module 6: Military / Armed Conflict Approaches to Countering Terrorism”
၂။ “International Humanitarian Law”
၃။ “အကြမ်​းဖက်​မှု တိုက်​ဖျက်​​ရေး ဥပ​ဒေ”
Previous လူ့အခွင့်အ​ရေးကို တရားဝင်​​ဖောက်​ဖျက်​ခွင့် ရ​နေ​စေ​သော ဥပ​ဒေ
Next ဒေါသမိုးမွှန်​ Irrational Actor များ နှင့် မြန်​မာ့လူကယ်​နည်